Soomaali ma Sidaan baa u Danbaysay
Soomaali ma Sidaan baa u Danbaysay !!!
Yoonis Aadan ( Cigalley )
Taariikhdu waa ma guurto, maduugowdo, dadku waxna waa ku daraan waxna waa ka dhimaan wixii mar soomarana waligeed waa laga dheehdaa. Waxaa xaqiiq ah hadeynu nahay soomaali in aynu nahay dad ilbaxiin ah oo baraarujiyey Afrika 60 maadkii markii ay ku jirtay halgankii xurnimo doonka ahaay, iyadoo lagu luqeeyey heestii eheed ” Hobey Afrikaay hurudooy halyeeyadaadii hurudooy, haamaa la saartee hurudooy” waxeynu nahay dad aqoon yahaniin ah oo ku taqasusey laamaha cilmiga oo dhan, waxeynu nahay dad geesi yaal ah oo ka gilgilsho gumeysiga, waxaana soo xasuusta heestii eheed ” Ceesaantii mas iyo good madax shabeel leeftaa, malageedi baa galayee” waana ayaan daro 47 sano ka dib in dalkeenii uu gumeysi ku jiro maanta!!
Umada Soomaaliyeed waa umad gumeysi diid ah hadii taariikhda dib loo raaco, maantana Soomaaliya aduunkoo dhan ayaa ka hiiliyey oo gacmaha qabtay waana arin naxtin leh oo fajac ah , Quwadaha waa is xoogaan dhulalna waa leyska qabsadaa laakiin maanta Qaramada midoobay ayaa jirto waana kaa aamustay, Carab waa kaa aamustay , Afrikana waa kaa aamustay.
Itoobiya waxaa dalka soo geliyey waa Mareykanka, wexeyna itoobiya u tahay Test uu ku tijaabinaayo New World Order sida dal loogu adeegsado dal kale , laakiin itoobiya waa ku dhiiqowday ka dib markii ay Maxaakiimtu ay bedeleen taatiikii dagaalka , maantana wexey ka taagan tahay yaa kaa bixiyo., sidoo kale USA wexey noosoo adeegsatay keynya.
Waa murugo iyo tiiraanyo in maanta isbitaalkii Martiini oo ah halka ay ku jiraan ciidamadii kusoo naafoobay dagaalkii 77 in uu hor taagan yahay kaare itoobiyaan ah, ayaga oo is wey diinaayo maxey lugaheygii iyo gacmaheygii ay u go’een hadii maanta wadankeygii itoobiyaan ay heestaan, taasna waxaa i badey jaahil iga mid ah oo itoobiyaan soo geliyey dalkii aan u soo naafoobay difaaciisa.
Safiirka itoobiya ayaa calan ka surtey Vila Somaliya isaga oo faragelin siyaasadeed ku hayo soomaaliya isaga ayaa amra dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo mida bulsho ee kooxda dowlada sheeganayso, mar hadii nalaga guuleestey siyaasadii iyo milaterigii ayuu bilaabay inuu ku tunto sharafteenii isaga oo u hanjabaayo warbaahinta madaxa banaan sida uu ku yiri Raadiyowga Shabeele hadii aydaan joojin wararka aad sheegeysiin waxaan idin ku soo fasaxayaa dad aan idin ka cel celinaayo!!!
Waxaana xigtey in la xiro raadiyaha shabeele wariyaashii ka shaqeynaayeyna xabsiga loo taxaabo, mudo yar kadibna waxaa la dilay wariyihii Capital Voice Allaha u naxariistee Mahad Axmed Cilmi iyo Agaasimihii Idaacada Horn Afrik Allaha u naxariistee Cali Iimaan Sharmaarke ayaga oo gudanaayo howlahooda suxufinimo, sabata loo dilayna waa maxaad uga hadashaan xasuuqa , barakicinta , xariga iyo dhaca umada lagu haayo.
Safiirka itoobiya markii uu joogay xiligii dowladii Aadan Cade , tii Cabdi Rashiid iyo tii Maxamed Siyaad waa ladaba geli jirey cid alla iyo cidii uu la kulmana dacwad ayaa lagu soo oogi jirey, laakiin maanta howlo aan quseyn ayuu faraha kula jiraa, waana inuu ku ekaadaa howlihiisa dibolomaasiyadeed walow maanta aysan muuqan wax dowlad layiraahdo, dalkana waxaa ka jiro gumeysi iyo shacbi halgamaayo.
Nimankaan shaarka dowlada loosoo galiyey wax wanaag , sharaf, nabad iyo horumar ah oo ay u keeneen ummada ma jirto, balse wexey u keeneen gumeysi soo jireen ah, iyo xasuuq, dhac, barakicin, xarig, kufsi oyo bahdilid aan ka eheen. Waa marka aynu usoo daadegno xaqiiqda.
Bini aadamka waxa ugu qaalisan waa sharafta, mar hadii sharaftaadii lagu tuntay oo gabdhahaagii la kufsanaayo oo wijiga laga feedaayo oo derbiga madaxa loo saarayo, culumadeeniina masaajidyada lagala baxaayo laguna sameenaayo bahdil ku saleysan hab diineed, waana tii ugu xumeed ee ibni aadamka soo marto mar hadii lagaala dagaalaayo diintaada.
Umadaan kala guuratay ,umadaan aan isku hiilineyn, aaway dareenkii soomaalinimo, aaway dareenkii qaranimo, aaway dareenkii wadaninimo, aduunka waxaa laga dhaa dhiciyey ayagaa isku maqan. Waana arin mudo dheer laga soo shaqeynaayey, in nala geliyo Iskadaba Wareeg ( Round competition ) mar hadey umadi gasho Iskadaba Wareeg waa adagtahay sidey uga baxdo, waxaana lagaa soo galay labada duleel ee Qabiilka iyo Jahliga, inta aad u arkeyso cadow walaakaaga soomaaliga ah isticmaarku wuu kaa faa- iideysanaa, wuxuuna kaa tirtirayaa dareenkii wadaninimo iyo dareekii aad ku dareemi leheed ama aad ku arki leheed gumeysiga.
Aqoon daridu waxey cadow u tahay sharafta bini aadamka ( ignorence is the enemy of human dignity ) waxaa nalaga burburiyey akhlaaqdii ( the character is destroyed) waxaana dhuntay sharaftii ( the dignity is lost ) akhlaaqda iyo sharafta oo luntay ee aaney u muuqan midnimadu waxa ay tahay, soomaalinimadu waxa ay tahay ee uusan u dareemeynin waxa la yiraahdo ( the identity of nationality) taasna waxaa sabab u ah jahliga.
Hadaba waxaa loo baahanyahay baraarug xag qaranimo iyo soomaalinimo si loo soo celiyo kalsoonideenii, dalkana looga saaro gumeysiga, waayo xuriyadeenii baa laqaatey , dhulkeenii baa laqaatey aduunkiina waa naga hiiliyey, waa na yasay oo na xaqirey, weligaana xuriyad banaanka lagaaga keenay haku seexan waa in dhiig loo daadiyaa.
Itoobiya waa cadwga soomaaliya, taariikhiyan ayayna cadow ula tahay, xal siyaasadeed wax kuma lahan ee iska dhicin bey wax ku leeyihiin, tigreey bixitaankeeda waxaa inaga xiga naf badan oon u hurno iyo maal badan.
Geedka gobanimadana wuxuu ku baxaa dhiiga dadka , miraha gobonimadana cid hadiyad loo siiyey ma jirto ee waa in dhiig loo daadiyaa, sharciga ayaana dhigaayo in leyska dhiciyo cadow kuugu soo duulay.
By:- Yoonis Aadan ( Cigalley )